Vtorrent စျေး - အွန်လိုင်း VTR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Vtorrent (VTR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Vtorrent (VTR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Vtorrent ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
VTR – Vtorrent
Market ကဦးထုပ်: $1 182 185.00
volume_24h_usd: $20 833.90
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Vtorrent တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Vtorrent များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VtorrentVTR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.159VtorrentVTR သို့ ယူရိုEUR€0.135VtorrentVTR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.122VtorrentVTR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.145VtorrentVTR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.42VtorrentVTR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1VtorrentVTR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.52VtorrentVTR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.591VtorrentVTR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.21VtorrentVTR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.222VtorrentVTR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.53VtorrentVTR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.23VtorrentVTR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.852VtorrentVTR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹11.89VtorrentVTR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.26.81VtorrentVTR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.218VtorrentVTR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.243VtorrentVTR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.94VtorrentVTR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.1VtorrentVTR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥16.95VtorrentVTR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩188.18VtorrentVTR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦61.53VtorrentVTR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽11.64VtorrentVTR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.36
VtorrentVTR သို့ BitcoinBTC0.00001 VtorrentVTR သို့ EthereumETH0.000414 VtorrentVTR သို့ LitecoinLTC0.00292 VtorrentVTR သို့ DigitalCashDASH0.00175 VtorrentVTR သို့ MoneroXMR0.00178 VtorrentVTR သို့ NxtNXT12.39 VtorrentVTR သို့ Ethereum ClassicETC0.0234 VtorrentVTR သို့ DogecoinDOGE45.83 VtorrentVTR သို့ ZCashZEC0.00193 VtorrentVTR သို့ BitsharesBTS4.89 VtorrentVTR သို့ DigiByteDGB5.08 VtorrentVTR သို့ RippleXRP0.564 VtorrentVTR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00547 VtorrentVTR သို့ PeerCoinPPC0.527 VtorrentVTR သို့ CraigsCoinCRAIG72.37 VtorrentVTR သို့ BitstakeXBS6.77 VtorrentVTR သို့ PayCoinXPY2.77 VtorrentVTR သို့ ProsperCoinPRC19.93 VtorrentVTR သို့ YbCoinYBC0.00009 VtorrentVTR သို့ DarkKushDANK50.97 VtorrentVTR သို့ GiveCoinGIVE344.01 VtorrentVTR သို့ KoboCoinKOBO36.19 VtorrentVTR သို့ DarkTokenDT0.146 VtorrentVTR သို့ CETUS CoinCETI458.75
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 08:20:02 +0000.